Notsapaina ny vera an'ny Apple Watch Sport | Vaovao IPhone
Ny kinova samy hafa amin'ny Apple Watch dia tsy mitovy afa-tsy amin'ny fitaovana anaovana azy ireo. Raha ny tena izy dia mitovy ny famantaranandro, tsy maninona na 350 $ na $ 17000, ny zavatra azonao atao amin'ny famantaranandro dia tsy miankina amin'ny vidiny. Mendrika ve ny vidin'ny premium amin'ny maodely lafo vidy kokoa? Ho an'ny ankamaroan'ny mpividy Apple Watch dia ny tena zava-dehibe amin'izy ireo dia ny hoe ny safira sy ny vy an'ny maodely mahazatra dia tena mandoa ny kristaly aluminium sy Ion-X an'ny maodely fanatanjahantena. Ao amin'ny Unbox Therapy dia nanandrana ny fanoherana ny vera amin'ny maodely fanatanjahantena izy ireo mba ahafahantsika mampitaha azy amin'ny kristaly safira amin'ny maodely vy, ary ireo no valiny.
Miaraka amin'io anarana io sonorous (Ion-X) no antsoin'i Apple hoe vera an'ny Apple Watch Sport. Tsy fantatray raha Gorilla Glass tsotra izao no nomen'i Apple anarana hafa na raha tena vera vaovao natao ho an'ny Apple Watch izy. Ny teboka dia na inona na inona pitsopitsony ara-teknika, ny fanoherana an'io kristaly io dia ambany lavitra noho ny an'ny kristaly safira ny maodely vy, izay tsy nibolisatra izy rehefa nampiasa ilay taratasy fasika tany aminy, mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny Ion-X izay simba.
Mazava ho azy fa amin'ny fampiasana ara-dalàna dia tsy tokony hisy ny hiahiahy fa ny vera Ion-X dia voahosotry ny vatan-kazo. Ny lakile na zavatra maranitra toy ny antsy dia singa akaiky kokoa amin'ireo herisetra mety horaisin'ny Apple Watch amin'ny fampiasana azy isan'andro, ary araka ny hitantsika dia manohitra azy ireo tsy misy olana. Na eo aza izany, tsy mahagaga, raha tena mila kristaly izay "porofo rehetra" isika, ny kristaly safira no tokony ho safidintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Notsapaina ny vera Apple Watch Sport
Hanome alika anao ve ny Apple Watch? Mety, raha tsy mahazaka nikela sy methacrylate ianao
Notsapaina ny fitaratra ion-X an'ny Apple Watch [video]